Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » UHilton Uvula eyona hotele inkulu eAsia Pacific
Hilton, enye yeenkampani zokubuka iindwendwe ezikhula ngokukhawuleza kwihlabathi, imiselwe ukusungula ihotele yayo enkulu eAsia Pacific ngokuvulwa kwegumbi eli-1,080. Igadi yeziqhamo yaseHilton Singapore ngoJanuwari 2022.
Ngoku ivulelwe ubhukisho, ihotele iya kuqala kumbindi wedolophu yase-Orchard ye-Singapore kwaye imele ubukho be-Hilton ye-flagship elizweni emva kohlaziyo olubanzi. Uguqulo olusuka kwiMandarin Orchard yaseSingapore yangoku, iHilton Singapore Orchard iphethwe yiOUE Limited kwaye iya kulawulwa nguHilton.
UPaul Hutton, usekela mongameli, ukusebenza, eMzantsi Mpuma Asia, uHilton, uthe,“Njengendawo ephambili yedolophu kushishino nabakhenkethi bezolonwabo, sinethemba lokukhula okunokwenzeka kwendawo yokwamkela iindwendwe yaseSingapore njengoko kuqalisa ukuchacha nokuhamba kuphinda kuqalise ixesha elide. Kuyasivuyisa ukuqalisa unyaka omtsha ngokuphehlelelwa kokongezwa okubalulekileyo kwipotfoliyo yethu yengingqi ngokuvulwa kweHilton Singapore Orchard, eya kumela ihotele eyiHilton eyiyona ndawo ibalulekileyo kwisixeko esibalulekileyo soMzantsi Mpuma Asia, kwaye sijonge phambili. ukuqhubeka nokuhambisa amanqanaba ethu aziwayo obubele bukaHilton kuye wonke umntu odlula kwiminyango yehotele. "
Ngokwendalo yendawo yayo enobuchule kunye nezixhobo ezibanzi kunye nezinto eziluncedo, iHilton Singapore Orchard entsha yeyona ndawo ifanelekileyo yoshishino kunye nokuzonwabisa. Ngaphantsi kwesiqingatha seyure yokuhamba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseSingapore Changi, abahambi banokulindela ukuhlala ngokuntywiliselwa kwenye yezona ndawo zinqweneleka kakhulu kwesi sixeko kwaye banandiphe ukufikelela kumava akhethekileyo avela kumxube we-eclectic wokutya kwezizwe ngezizwe, ifashoni kunye noyilo kunye noluhlu olubanzi. yeevenkile ezinkulu. Iindwendwe ezihamba ngeenjongo zonyango nazo ziyakuthakazelela ukuba kufutshane kumaziko onyango eengcali eziphambili abekwe emnyango wabo.
INDAWO YOKUHLALA YAMHLANJE
Ngamagumbi ayi-1,080 ahlaziyiweyo kunye namagumbi anqumla kwiinqaba ezimbini, iHilton Singapore Orchard iya kuba yenye yeehotele ezinkulu eSingapore. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwiindidi ezahlukeneyo zamagumbi kunye neesuti, ngelixa abo bahamba neentsapho kunye nabantu ababathandayo banokukhetha ukubhukisha amagumbi okudibanisa ehotele anokuqinisekiswa ngoko nangoko ngexesha lokubhukisha. Ihotele ikwimeko entle yokubonelela ngamacandelo ohambo ahlukeneyo, ukusuka ekuphumleni ukuya kubahambi beshishini kunye neenkampani ukuya kumaqela amakhulu.
IZIBONELELO EZANDISI NEENKONZO
Iindwendwe ziya konwabela iintlobo ngeentlobo zezinto eziluncedo kunye neenkonzo ngaphakathi ehotele kubandakanywa amaziko amabini okuzilolonga iiyure ezingama-24 axhotyiswe ngokupheleleyo, ichibi langaphandle, iLounge yeSigqeba esandula ukusekwa kunye noqhagamshelo oluthe ngqo kwigalari yevenkile enemigangatho emine enenkitha yasekhaya nehlabathi. iimpawu zefashoni kunye neekhefi zokutyikitya kunye neeresityu.
AMAVA OKUTSHA OKUPHILA
Isetelwe ukuba ibe yindawo yokutyela yodwa, iHilton Singapore Orchard iphinde inyuse indawo yokupheka yesixeko ngeekhonsepthi ezintlanu zokutyela ezicwangcisiweyo ezibandakanya iChatterbox ephumelele ibhaso, uShisen Hanten oneenkwenkwezi ezimbini zikaMichelin kunye neminikelo yokutya emithathu entsha kunye nesiselo esinesidlo sosuku lonke. , indawo yokutyela ekhethekileyo kunye negumbi lokuphumla kunye nebha.
IINTLANGANISO KUNYE NEZIGANEKO
Ngeendawo ezili-16 ezihlaziyiweyo neziguquguqukayo zemisitho ezithatha ngaphezulu kwe-2,400 yeemitha zesikwere, ihotele iya kukwazi ukuhlalisa iintlanganiso kunye nemisitho ukusuka kwiindibano kunye nemiboniso ukuya kwimitshato kunye nemibhiyozo yentlalontle. Ukubonelela ngeyona ndawo inkulu yesiganeko kwisixeko, i-Hilton Singapore Orchard iya kuba neendawo ezimbini zebhola eziyilwe ngokukodwa kunye nezingenantsika ezifakwe kwiindonga ze-LED, ukukhanya kunye nobuchwepheshe besandi obunokubonelela ngeendwendwe ze-1,000 kunye ne-pre- indawo yokusebenza. Kwiintlanganiso ezincinci, abacwangcisi banokukhetha kumagumbi okusebenza ali-12, uninzi lwawo olwamkela ukukhanya kwemini yendalo, kunye neendawo ezininzi ezikhuthazayo ezijikeleze ihotele ngexesha lekhefu lekofu labucala kunye neeseshini zokuphumla.
UCedric Nubul, umphathi jikelele, uHilton Singapore Orchard uthe, "I-Hilton Singapore Orchard iya kuba yenye yeehotele ezilindelekileyo ukuba zivulwe ngo-2022 kunye nokongeza okuthakazelisayo kwindawo enomdla kwi-Orchard Road. Ngendawo yokuhlala eyi-1,080 ekhethwe kakuhle, enye yezona ndawo zinkulu zesiganeko kule ndawo, iikhonsepthi ezintlanu ezigcinwe kwindawo yokutyela kunye nendawo esembindini ethe tyaba entliziyweni yevenkile yaseSingapore kunye neyokutyela, ihotele imiselwe ukuba ibe yindawo yokhetho lweshishini kunye neshishini. abakhenkethi bokuzonwabisa, kwanabo bahlala apha.”